မေမေတို့သတိပြုမိစေဖို့ .. လက်ကိုဘာကြောင့်စင်ကြယ်အောင်ဆေးသင့်သလဲ???
Posted by Harry April 30, 2018
မေမေတို့ရေ လက်မှာကပ်ပါလာနိုင်တဲ့ မစင်အညစ်အကြေးအနည်းငယ် (တစ်ဂရမ်) မှာတောင် လူတေွကိုရောဂါဖြစ်ပြီးသေစေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး (၁၀) သန်းခန့်၊ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးပေါင်း (၁) သန်းခန့်၊ ကပ်ပါးရောဂါပိုးပေါင်း (ဥပမာ-သန်ကောင်၊ ၀မ်းကိုက်ပိုး) ၁၀၀၀ ခန့်၊ ကပ်ပါးရောဂါပိုးဥပေါင်း (ဥပမာ - သန်ဥ) ၁၀၀ ခန့်ပါ၀င်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
မေမေတို့ရေ ကလေးမစင်မှာလည်း လူကြီးမစင်တေွနည်းတူ ရောဂါပိုးတေွပါ၀င်နေနိုင်လို့ ဘယ်လိုအညစ်အကြေးပဲ ကိုင်တွယ်ပြီးပါစေ လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ သေချာစွာဆေးကြောဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကလေးတေွအနေနဲ့လည်း အညစ်အကြေးတေွကို ကိုင်တွယ်မှုတေွမရှိဖို့နဲ့ ကိုင်တွယ်မိတဲ့အခါမှာလည်း သတိထားစောင့်ကြည့်ပြီး သေချာဆေးကြောပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။